Qalabka daboolaya | February 2020
Burka Dolomite: codsiga iyo hantida
Noocyada Agrofibre iyo isticmaalka
Bannaanka u badan iyo bannaanka u, kuwaas oo hore u isticmaalay balka, peat ama cagaaran qaab foomka mulching, ugu dambeyntii u beddelay agrofibre. Qalabkan waxaa ka mid ah shirkadaha waaweyn ee beeraha, laakiin sidoo kale beeraha yaryar. Maanta waxaan baran doonaa waxa agrofiber ah, ka wada hadla isticmaalka, iyo sidoo kale baaro qulqulaha hawlgalka.
Sida loo isticmaalo waxyaabaha daboolaya "Agrotex"
Beeralayda xirfadlayaasha ah iyo beerta hiwaayadda waxay leeyihiin hal shaqo - si ay u koraan dalag iyo ka ilaaliyaan xaaladaha cimilada daran, cudurada iyo cayayaanka. Maanta waxa aad u sahlan in la sameeyo tan tan ka hor, haddii aad isticmaasho alaab tayo fiican leh - Agrotex. Qeexida iyo sifooyinka alaabta Qalabka daboolka "Agrotex" waa agrofibre, neefsasho iyo iftiin, oo la soo saaray sida waafaqsan tiknoolajiyada isgaadhsiinta.
Waa maxay fodheelka?
Marar badan, marka laga beerto abuurka, waa lagama maarmaan in la siiyo xaaladaha aqalka dhirta lagu beeray dalagyo kala duwan. Si loo ilaaliyo geedo dabaysha, qabow iyo waxyaabo kale oo dibedda ah, isticmaal qalabka gaarka ah ee hoyga. Maqaalkeena waxaan ku sharaxi doonaa lutrasil, kuu sheegi waxa ay tahay iyo sida loo isticmaalo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qalabka daboolaya 2020